Hiran State - News: M/weynaha Hiiraan State iyo M/weyne ku xigeenka Puntland oo ka wada hadlay mustaqbalka.
M/weynaha Hiiraan State iyo M/weyne ku xigeenka Puntland oo ka wada hadlay mustaqbalka.
Talaado 28, December 2010 (HSOL)Xiriir dhinaca telefonka ah oo dhax maray madaxda Puntland iyo Hiiraan State ayaa looga hadlay mustaqbalka ciyaariyahanada qaranka Hiiraan oo iyagu dil ku xukuman hadey dib ugu laabtaan gudaha Hiiraan ayaa dhex maray madaxweynaha Hiiraan State Dr Moh'ud Abdi Gaab iyo m/weyne ku xigeenka Puntland C/samad Ali Shire.
Madaxweynaha Hiiraan State oo Puntland kala hadlay sida ugu haboon ee mustaqbalka ciyaartooydaas loo bad baadin lahaa maadama ay yahiin ciyaartooyda kaliya ee dalka Somaliyaha kooxahii ka socday loo hanjabay lana xiray. kooxda Hiiraan waxey ku tageen magaalada Garoowe qaab aysan ku tagin ciyaartooydii kale ee dalka ka kala tagay oo dhamaantood ka tagay goobo ay Shabaab ka taliyaan kuwaas oo ay kooxda Shabaab ka soo amba bixiyeen goobo ay ka taliyaan halka Shabaabka ku sugan Hiiraan State oo aan ka mid aheyn madaxda sare ee ururka lagu amray iney xiraan kooxdii ka qeyb galilaheyd tartanka.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa sheegay iney arintaas ka warhayaan uguna mahadceliyey xiriirka uu madaxweynaha Hiiraan State la soo sameyey maamulkooda. kaftan iyo dood dheer kadib ayaa waxuu wada hadalkii ku dhamaaday is afgarad iyo iney arimaha noocasi ookale ah iska kaashadaan labada maamul.
Dul MAr guud halka ay ciyaartooyda ku sugan yahiin maanta.
Ciyaartooyda qaranka Hiiraan ayaa isla maalintii ay ka hareen ciyaaraha waxaa banaanka loo soo dhigay dharkooda waxaana loo sheegay in ay Quraac oo kaliya ku leeyahiin oo aysan qado iyo casho iyo waliba jiif ka raadsadaan meeshii ay ka yimaadeen arintaas oo laga soo xirtay qaar ka mid ah ciyaartooyda. kedibna waxaa ka dhiidhiyey qurbojoogta reer Hiiraan oo ciyaartooyda u sheegay ineysan dib ugu laaban Hiiraan inta laga hubinayo nabadgalyadooda sidasi daraadeed ay iyagu ka caawin doonaan wax yaabo yar yar oo ay dhalinyarada u baahan yahiin.
Sucaado Diiriye oo ka mid ah ciyartooydii cuslaatay kana mid aheyd ciyariyahanadii gobolka Sh/dhexe u ciyaari jira beri samaadkii iyo ciyaari yahano kale oo dhamaantood qurbaha ku nool ayaa ka walwalsan xaalada ciyaartooydaas qaranka Hiiraan. ilaa hada ciyaartooyda Hiiraan waxaa noloshooda gacanta ku haya oo dhaqaalo u diray dad is xilqaamay. laakinse gudigii abaabulay ciyaaraha iyo maamulka martida loo ahaa ee Puntland ayaan ilaa hada waxbo ka qaban arintaas kedibna sidaas ayuu madaxweynaha Hiiraan State ula xariiray madaxda Puntland.
Guriga ay degan yahiin ciyaartooda Hiiraan ee magaalada Garoowe iyo qaabka ay noloshooda u maareeyaan filo xog rasmi ah dhawaan. sida la saadaalinayo waxaa dhici karta in arintaan ay soo fara galiyaan maamulka Puntland si hadii mustaqbalka hadey Tartan u yimaadaan Hiiraan loo wanaajiyo iyaguna.
· admin on December 28 2010 18:05:08 · 0 Comments · 3436 Reads ·
14,605,795 unique visits